Embossing Machine, otomatiki PVC Coating Machine - Zhongshuo
CPL-Coil kuti Coil Polishing Line
Zvekubatsira zvemagetsi coil kune coil mutsara
SPL-Sheet kuSheet Polishing Line
PGL-Kukuya Polishing Mutsetse wePlate Inorema
Mirror Kupedzisa Machine ye Stainless Simbi Plate
Mirror Kupedzisa Machine yeCold Rolling Coil uye Sheet
Brushing Machine yeHL Kupedzisa
Kuisa Mudziyo neVacuum Cup Boka
Yakazara otomatiki PVC Kubata Mashini
Kushambidza & Kuomesa Muchina
Magetsi uye Kuzvigadzirira yega mutsara wakakwana
CPL inoiswa kunyanya pakubvisa diki diki mukutonhora kutenderera SS coil mumvura, riwane kupedzisa kushongedza, kureva Nha .3, No.4, HL, SB & Duplo. Iyo inotonhorera inogona kuve emulsion kana mineral mafuta. Kutonhorera fera uye system yekudzokorora kwakakosha mutsara wakakwana. ZS CPL yakagadzirirwa kutonhora kutenderera coil ku coil kugadzirisa kumusoro kubva pa100 kusvika 1600 mm pahupamhi uye hukobvu huri pakati pe1.4 kusvika 3.0 mm.
Wuxi Zhongshuo Machina
It You All Matanho E nzira.
Kubva pakusarudza nekugadziridza iko kurudyi
muchina webasa rako kuti ubatsire iwe kutsigira nemari mari yekutenga iyo inopa mukana unooneka.
CPL inoisirwa kunyanya kuT ...
Rizere neShizha ...
Yakazara Automatic Kugeda uye ...
Chimiro ndeye 4 column gantr ...
Mirror Kupedzisa Muchina weCold Rolling Coil ...
Pina roll rudzi. Izvo zvinoshanda ...
Kuiswa Scoth-Brite Roller ...
Muchina uyu unonyanya kushandiswa ...
Iyo ine gantry fra ...
Iyo system inosanganisira: 2 pneu ...
Mugore ra2005 takatanga kugadzira, kugadzira uye kushepesa bhandi yekucheka makina esimbi. Nekuenderera mberi kwekuwedzera kwebhizinesi uye nekushandurwa kweiyo share sharesi chimiro, mune gore ra2015 Wuxi Zhongshuo Machina Co, Ltd yakavambwa.
Iyo kambani iri muWuxi City, Jiangsu Province. Iyo yakanyoreswa capital is 8 miriyoni RMB. Nzvimbo yekuvaka inodarika 7000 m2. Huwandu hwevashandi hunopfuura makumi matanhatu, kusanganisira 1 Wedzero mainjiniya, maviri einjiniya makuru uye mashanu mainjiniya.
2m Yakapamhama Yakakomberedza Bhanhire Kusvinudza Machine yeSS Heavy Plate
"Ndiwe mubatsiri wedu wenguva refu akavimbika": Wuxi Puxin Metal Zvigadzirwa Co, Ltd yakaraira mutsara wekukutu weyakaunzi simbi inorema yakagadzirwa naWuxi Zhongshuo MachinaZS Mashina Nha. 39, Qunxing Rd, Jan, 2020 - Chibvumirano chitsva chakapihwa: Musi waNdira , 10, anotungamira Chinese chinesimba ...
Yakanakisa bhanhire rakakura grinder yeTitanium sheet calibration
Ndira / 03/2020
"Yakanakisa bhanhire rakakura grinder yeTitanium sheet calibration" yakagutsikana: MuChinese Mutengi akarayira 2 pepa kurongedza mitsara yekubva kuWuxi Zhongshuo Machina ZS Mashina Nha. 39, Qunxing Rd, Jan 3, 2020 - Chibvumirano chitsva chakapihwa: PaZvita, 13 Chikumi 2019, inotungamira yeChina titanium mill, yakasimbisa c ...
Best mutengo kuita ration chigadzirwa pasi rese
"Yakanakisa mutengo wekuita chigadzirwa ration pasi rese" yakagutsikana: mutengi weItaly akarayira zvizere otomatiki pepa mutsetse wakagadzirwa Wuxi Zhongshuo Machina ZS Machina Nha. 39, Qunxing Rd, Kurume, 2019 - Chibvumirano chitsva chakapihwa: PaNovember, 22nd, anotungamira Italian isina Stainless sisitimu yekushandira, simbisa ...
zhongshuomach Machine @ 163.com